Bofa Lafa Jiru Ulee Harka Jiru! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooBofa Lafa Jiru Ulee Harka Jiru!
Baarentuu Gadaa Irraa, Caamsa 4, 2018
Caamsaa 2, 2018: Rakkoo tasgabbii naannoo daangaa Gujii lixaa fi Geede’ootti uumamee ture araaran furuuf hojjetamaa jira. Abbaan Gadaa Oromoo Gujii, Jiloo Maannoo ummanni lamaan obbolaa ta’uu kaasanii, araarri jalqabames galma akka ga’uuf hojjetamaa kan jiru ta’uu ibsaniiru. Abbaan Gadaa Geede’oo, Danboobii Maaroo gama isaanitiin nageenya waaraa buusuun ummata obbolaa lamaanif barbaachisaadha jedhan. Araara ummattoota godinichaa lamaan jidduutti buusuuf Caamsaa 3 bara 2018tti beellamni qabamee akka jiru beekameera
Uummanni Oromoo waggoota hedduuf addatti bara bittaa wayyaanee waggoota 27n darbaniif mirga abbaa biyyummaa isaa dhiitamee osoo qabuu hiyyoomee, beelaa fi dheebuuf saaxilamee mankaraaraa jira. Mirga abbaa biyyummaa sarbame kana deeffachuuf ammoo qabsoo walirraa hin cinne, qabsoo hadhooftuu gaggeessaa ture. Addtti waggoota 3n -4n darban kana keessa qabsoon uummanni Oromoo sirna gabroonfataa Wayyaanee irratti gaggeessaa turee fi jiru qabsoo fakkeenyammaa guddaa qabuudha. Kan wareegamni qaqqaaliin itti kaffalame.
Mootummaan TPLF/EPRDF uummata Oromoo waggoota 27n darbaniif hidhee, ajjeesee amma isa gahu saameera. Oromoon isa kana jalaa of baasuf addatti qabsoon inni gaggeessaa ture FXG seenaa biyyattii keessatti kan addaati. Saboota cunqurfamoo biroofuu fakkeenya guddaa ta’eera. Qabsoo gaggeessaa turee fi jiru kanaannis murna faashistii TPLF/ /EPRDF jedhee of waamu kana dhiphuu hamaa keessa galcheera. Bakkaayis sochooseera. Akka mataa gadi qabatu, akka osoo hin jaalatin tarkaanfilee tokko tokko fudhatus dirqeera.
TPLF/EPRDF Murna yakkamaadha, mootummaa shiftootaati, waggoota 27n darbaniif yakka sukanneessaa saboota biyyattii hundarrattuu addatti ammoo saba Oromoo irratti xiyyeeffatee yakka sukanneessaa danuu raawwateera. Ilmaan saboota biyyattii hedduun sirna faashistii kana baqataniis qayee fi qabeenya isaanii dhiisanii biyyaa bahaniiru. Hedduun Galaanaaa fi gamamoojjittis dhumuun eenyu jalaawuu dhokotaa miti. Kan hafan biyya isaanii irratti hidhamanii, samamanii, gargaarsa mootummaa dhabanii hiyymmaa, beelaaf saaxilamaniiru. Haa ta’uutii yakka sirni kun raawwatuuf osoo gadi hin jedhin saboonoonni qabsaawoonni qaroon sabaa uummata Oromoo gabrummaa bara dheeraa jala jiru gabrummaa halagaa jalaa baasuuf cichoominaa fi jabinaan falmaa turaniiru. Falmaas jiru.
Saboonnii biyayttii addatti sabni Oromoo erga murni TPLF/EPRDF ofiin jedhu kana jalatti kufee kaasee guyyaa tokkoofilleen ciisee hin beeku, Uummanni Oromoo hammeenya sirna kanaa bu’uurumarraa waan hubateef dhaaba isaa ABO, Ilmaan isaa qeerroo waliin ta’ee falamaa mirga abbaa biyyummaa gaggeessaa ture. harralleen irraa hin dhaabbanne. Akkuma argaa jirru qabsoon isaas firii naqatee sirnichaa dhiibee sadarkaa xumurarraan gaheera. Qabsoon eegalame finiinee itti fufnaanis sirni kun akka yeroo gabaabduu keessatti buqqayee badu shakkiin hin jiru.
Mootummaan abbaa irree fi faashistiin waggoota 27f uummattoota biyyattii addatti saba Oromoo keessumaa ilmaan isaa irratti xiyyeeffachuun yakka sukanneessaa adda addaa raawwachaa ture TPLF EPRDF ofiin jedhu kun mootummaa soban beekamuudha. Mootummaa aantummaa uummataa hin qabne mootummaa abbootiin irree ijaaraniidha. Sirni kun aangoo humnaan qabate kanarra turuuf ammoo holola adda addaa karaa ergamtoota isaa gaggeessaa ture, amma ammoo hojii isaa isa ijoodha. Murni kun Oromoon aangoo hunda dhuunfate holola jedhurraa kaasee amma dhaaboolee mormitootaa koo ta’an waliin marii’achuufan jira. Midiyaalee dhuunfaa biyyoota alaa taa’anii sagalee uummata dhageessisan akka gara biyyaa galanaii tamsaasa isaaanii kallattiin biyyaa tamsaasan waamicha goonaaf kan jedhu yoo waadaan kijibaa galamuu fi tarreeffamu arginee dhageenyee jirra.
Dhugumatti hololli gaggeeffamaa jiru kun holola dhugaatii jennee yoo ilaalle garuu akkuma abbootiin yoo dubbii mammaaksan fixan yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi jedhan san hololli wayyaaneen Dr.Abiyyis ta’e dabballoota OPDO bobbaasuun gaggssaa jiru holola kijibaa, holola yeroo ittiin bitachuuti. Sirni kun har’a kan gaafii ummataatiif deebii kennaa jiru fakkaatee, qondaaloota TPLF tokko tokko aangorraa gara duubattii deebisee kunoo Oromootu gutummaa gutuutti aangorra jira jedhus ni kijiba. Ni Riphee malee dhugaadhaan gaafii ummataaf deebii kennaa hin jiru. kaayyoon sirna kanaa holola fakkeessii boru gongumaa sirna kana jalatti deebii hin arganneen warra mirgaaf falamu yoo danda’e laamshessee oolee bulee akkuma amala isaa bakka riphee ka’ee yakka isaa itti fufuufi. Sabboontoota qabsaawoota mirga saba isaaniif falaman hidhuu ajjeesuu fi dararuun qabsoo saboota aaddatti qabsoo Oromoo rarraga bilisummaarra gahe kana yoo danda’e karaatti hanbisuufi. Kun ammoo shakkii ykn ta’innaa laataa miti. Amala wayyaanoonni bara qabsoo gaggeessaa turaniirraa eegalee ittiin beekamaniidha. Wayyaanoonni yoo muddaman ni araarmna, waliin hojjenna jedhanii kan isaan amanee itti hiiqe hidhaa, daraa fi ajjeesaa bakka buutee dhabamsiisaa turan. Ammas kanumaaf hololaa, riphaa jiru.
Sirni TPLF/EPRDF kun yoo dhuguma qulqullummaan jijjiirama waaraa kan saboonni biyyattii addatti uummanni Oromoo barbaadu hojiirra olchuuf jiru ta’e, yoo dhuguma dirreen dimookiraasii akka ballatu barbaada ta’e gaafii ummataa hordofee maaf mootummaa cehuumsaa hunda hammatu hin dhaabne? Maaf akka ABOn jedhu bakka qaamni 3n jirutti haasaan dhugaa hin taasifamne maal sodaata? Maal shakka ? sirni kun yoo dhuguma akka midiiyaaleen bilisaa kanneen akka SBO, Sagalee Qeerroo,TV Gaadisa dhugaa ykn ONN, OMN, Esat fi kan fafakkaatan tamsa’aniif fedhii qaba ta’e maaf biyyatti koottaa jedhee waamuu dura bakka jiranii kanumti facaasan akka uummata bira sirnan gahuuf uggura ykn ukkaamsaa gaggeessan hin dhaabne? Kun qoosadha, DR Abiyyi waan hin fakkaanne qoosaa jira. Diraamaa fookkisaa goftoliin isaa wayyaanoonni dalagi jedhaniin calliseetuma osoo hin gulaaliin taatoo ta’ee dalagaa jira. Dirmaa kana keessattis waan hin taane ta’ee of muldhisaa jira. ykn “over act” godhaa jira. Kun ammoo Tiyaatirichaa dhugaarraa fageessee harkatti busheessaa jira.
Mee yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo meeqatu mana hidhaa jira? Meeqatu ammoo komaandi postiin guyyaa guyyaan dararamaa fi ajjeefamaa jira? Saamichi qabeenyaa hoo ammami? Deebiin isaa ifadha. Kumaa kitilatu hidhamaa fi ajjeefamaa jira, hidhamees mankaraaraa jira. Saamichis amma hin qabu. Kan qalbiin hubatee ilaaluuf sirnichi ni riphe malee hin kufne, sirnichi dhiphuu amma qabsoo Oromootiin itti bule ykn keesse seena kana jala darbuuf diraamaa ykn tiyaatira dalagaa jira malee dhuguma hin jijjiramne. Jijjiramuufis fedhee hin qabu. Aangoon inni Oromoof qoodee ykn kennees hin jiru. Mataa gadi qabate malee bineensummaan isaa akkuma jirutti jira, Afuura xiqqoo argannaan amala isaa isa beekamuun san gadi baasun hidhaa, dararaa fi ajjeechaa jumlaatti akka deebi’u shakkiin hin jiru. kana ammoo cimsanii hubachuun akkaan barbaachisaadha.
Oromoos ta’ee saboonni biyyattii hunduu holola yeroo ammaa kana TPLF dhaabolee ergachaa turee fi jiru kanneen akka OPDO,DHDN,BADN of dura oofuun gaggeessaa jiru akkaan hubachuun barbaachisaadha. Sirnicha Eenyuyyuu amanuu hin qabu. Sirnichi kan amanamuu miti. Keessumaa Oromoon shira sirnichaa adda baafatee beekuu qaba. Oromoon kan qabsoo isaa gaggeessaa tureef mirga abbaa biyyummaaf malee haangoo bubbutuu miseensoonni OPDO sirnicha tajaajilaa turanii fi jiraniif kennamuufi miti.
Mootummaan TPLF /EPRDF kun mootummaa takkaa dhugaa dubbatee hin beekneedha. Dhugaa hin beeku. Mootummaa sobaa fi ajjeechadhaan humrii isaa dheereffachaa as gaheedha. Kanaaf ammoo waggoonni 27n darban ragaa guddaadha. Yoo akka dabalataatti kan barbaachisu ta’e ammoo dhaabooleen mirga namoomaaf falman kanneen akka Aministii Intarnaashinaal, human raayit woch, Ligii mirga namoomaa gaafa Afrikaa fi dhaabooleen siysaa fi mirga namoomaaf falaman hedduun dabaa fi soba mootummaa kanaa ragaa bahaa turan ragaa bahaas jiru. Tibbuma dabrsine kana yeroo 2ffaaf kan impaayeera san daawwatan itti gaafatamaan dame mirga namoomaa idil addunyaa komishinar Ziyaad -alhuseen yeroo daawwannaa isaanii fixanitti ibsi isaan gaaxeessitotaaf kennan mootummaan sun kan hin amnamne mootummaa kijibaa ta’uu isaaf rgaa guddaadha.
Zayaad al huseen ibsa gaazeexeessitootaaf kennaniin dhiittaan mirgaa impaayeera sana keessatti raawwataa turee fi jiru akkan hamamadha addatti kan Oromoo iarrattai raawwate erga jedhanii booda, yoo tarii kan mootummaan EPRDF kan jedhu dhugaa ta’ee hojiirra oole, yoo tarii inni dhaaboolee siyaasaa mormitootaa waliin ni teenyee mira’annee furmaata siyaasaa finna jedhu, inni yakka dhala namaarratti biyya sana keessatti raawwataa turee fi jiru ni qoranna furmaata itti kennina jedhu dhugaa ta’e ni bullee ilaalla jedhaniiru. Hubadhaa angoowaan olaanan biyyoota gamtoomanitti hogganaa damee mirga namoomaa idili addunyaa ta’an kun kan jedhan dhuguma TPLF/EPRDF kan jedhe hojiirra olcha hin jenne taro yoo dhugaa ta’ee hojiira olchan jedhan, mootummichi kan hin amanamne kan waan jedhu hojiitti hin hiikne mootummaa sobaa fi dhiittaa mirga namaan jiraatu ta’uu ifatti ragaa bahan . kanaafuu Oromoon waggoota 27f dhiitame sabni holola sirna kanaa amanuuf hin jiru jechuudha. Amanasa hin ture, amanuus hin qabu.
Egaa sirna hunduu sobduu ta’uu isaa mirkaneeffatee ragaa irratti bahaa jiru kana falli namarraa buusu qabsoo qofa. Oromoonis kanuma hubatee qabsoo isaa eegale FXG jabeessee itti fufee bilisa of baasuu malee fala biraa waan hin qabneef qabsoon ittaa fufu jenna. Sirni kun sirna yoomiyyuu isaaf hin ciifne, sirna soba fi isa balleessuuf kutatee ka’e, kan guyyaa itti eegataa jiru ta’uu beekuu qaba. Beekuu qofas osoo hin taane qabsoo eegale falmaa mirga abbaa biyyummaa isaa finiinsuun dubbii fardiidha. Diinni/ halagaan amma barbaadeeyyuu si jaalle jedhu jaalalli isaa amma haalli mijaawufitti ta’uun beekamaadha. Kanaafuu dubbiin “Bofa lafa jiruu, ulee si harka jiruu maalan sigorsa”? akkuma jedhamu san waan ta’eef diina qabsoo keenyaan butute kana xumura itti gochuun akka malee barbaachisaa waan ta’eef qabsoon cimee itti haa fufuun dhaamsa keenya!
Haacaaluu Ajjeesuu Caalaa Hammeenyi Nafxanyaan Uummata Oromoo irratti Hojjetu Hin Jiru Damee Boruu: Fulbaana 24,…
hundee hussein says:
dhugaa jate jaalleekoo dhugaa dhabini